အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ ဧပြီ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၅၇ ဦး ရှိခဲ့ရာ ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်း ကပ်ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှ စ၍ တစ်ရက်အတွင်း သေဆုံးသူ အရေအတွက် အမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလမ်းညွှန်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန(NCOC) မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ရန် အိန္ဒိယမှလာသည့်ခရီးသွားများ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ကို အီရန် တားမြစ်
ပေကျင်း၊ ဧပြီ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အကြောင်းကြားသည့် ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် အိန္ဒိယမှလာသည့် ခရီးသွားများ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ကို တားမြစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန် သမ္မတ ရိုဟာနီက ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုလံဘို၊ ဧပြီ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ မကြာသေးမီရက်များအတွင်း COVID-19 လူနာအရေအတွက် တိုးမြင့်လာသော်လည်း ခရိုင်အချင်းချင်းအကြား ခရီးသွားလာခြင်းများအား lockdown သို့မဟုတ် တားမြစ်ခြင်းကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ သတိဖြင့် နေထိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တပ်မှူး နှင့် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဌာန အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Shavendra Silva က ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
မော်ရိုကိုနိုင်ငံက COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားလုံး ရပ်ဆိုင်း
ရာဘတ်၊ ဧပြီ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မော်ရိုကိုနိုင်ငံက COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အသွားအပြန် လေကြောင်းခရီးစဉ်များအားလုံးကို ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် ဆိုင်းငံ့လိုက်ကြောင်း မော်ရိုကို အမျိုးသား လေဆိပ်ရုံး (ONDA) က ၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန (FDA) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေးစင်တာ (CDC) က Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အသုံးပြုခွင့်ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အသုံးပြုရန် ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၂၃ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ဆေးရုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ လူနာ ၁၃ ဦးသေဆုံး
မွမ်ဘိုင်း၊ ဧပြီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့အနီးရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ဧပြီ ၂၃ ရက် အစောပိုင်းက မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး COVID-19 လူနာ ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
မွမ်ဘိုင်းမြို့မှ မြောက်ဘက် ၇၄ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေးသော ဗီရာမြို့ရှိ အဆိုပါ ဆေးရုံတွင် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၃:၁၅ နာရီက မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားစဉ် လူနာ ၉၀ ဦးတက်ရောက်ကုသလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သောလူနာများအား နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆေးရုံ၏ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ရှိ လေအေးပေးစက်ယူနစ် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မီးလောင်မှုအား ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၅:၃၀ နာရီအထိ ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှုအရာရှိ အဆိုအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက မွမ်ဘိုင်းမြို့ရှိ COVID-19 စောင့်ရှောက်ရေးဆေးရုံတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူနာ ၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဧပြီ ၂၁ ရက်ကလည်း မွမ်ဘိုင်းမြို့မှ ၁၆၇ ကီလိုမီတာအကွာ နာရှစ်ခ်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ခုတွင် အောက်ဆီဂျင်သိုလှောင်ကန်အတွင်း ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အောက်ဆီဂျင်ပေးပို့မှု လျော့နည်းခဲ့ရာ လူ ၂၉ ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပံ့ပိုးမှု ပြတ်လပ်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကာ လက်ရှိအချိန်အထိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၂.၃ သန်းနီးပါးရှိလာပြီး သေဆုံးသူမှာလည်း ၁၈၄,၆၅၇ ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MUMBAI, April 23 (Xinhua) -- At least 13 COVID-19 patients have been killed afterafire broke out ataprivate hospital near India's financial capital Mumbai in the early hours of Friday, hospital officials said.
There were altogether 90 patients when the fire took place in the hospital, which is located at Virar, about 74 km north of Mumbai, at about 03:15 a.m. local time.
The surviving patients have been shifted toanearby healthcare facility.
The fire, preceded by an explosion in the air-conditioner unit of the intensive care unit of the hospital, was extinguished by 5:30 a.m. local time, according toadisaster management official.
Last month,afire ataCOVID-19 care hospital in Mumbai led to the deaths of nine patients, while earlier this week on Wednesday, low oxygen supply after leakage in the tank led to 29 deaths inacivic-run hospital at Nashik, 167 km away from Mumbai.
India has been facingashortage of oxygen supply in the midst ofasecond wave of COVID-19 wave and so far, has close to 2.3 million active cases with 184,657 deaths. Enditem
People line up for the COVID-19 vaccine atastadium in Guwahati, India, on April 22, 2021. India's COVID-19 tally reached 15,930,965 on Thursday asarecord single day spike of 314,835 new cases was recorded in the country. (Str/Xinhua)
ဟူစတန်၊ ဧပြီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၌ Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူရခြင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များက ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘန်ကောက်၊ ဧပြီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဧပြီ ၂၃ ရက်၌ COVID-19 ထပ်မံကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၂၀၇၀ ဦးသို့ စံချိန်တင်ရောက်ရှိခဲ့ကာ စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၅၀,၀၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရေးစင်တာ (CCSA) မှ သိရသည်။
လန်ဒန် ၊ ဧပြီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များ ကြီးကြပ်မှုဌာန၏ ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းပြုစုချက်အရ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁၆၈ ဦး၌ AstraZeneca ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနှင့် အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်တို့မှ ပူးပေါင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် သွေးခဲသည့် လက္ခဏာများဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့အနက် ၃၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျူးဘားနိုင်ငံတွင် COVID-19 လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို မေလမှစတင်ရန် ပြင်ဆင်
ဟာဗားနား၊ ဧပြီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကျူးဘားနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၂ သန်းကျော်နေထိုင်သော ဟာဗားနားမြို့တွင် နိုဗယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို မေလ၌ စတင်ရန် ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များက ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီ ၂၂ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။